Tag: kubatanidzwa | Martech Zone
Nei infographics Yakakurumbira? Zano: Zvemukati, Kutsvaga, Zvemagariro, uye Shanduko!
Mugovera, March 6, 2021 Mugovera, March 6, 2021 Douglas Karr
Vazhinji venyu munoshanyira bhurogu yedu nekuda kwekushingirira kusimba kwandinoisa mukugovana kushambadzira infographics. Zvichitaurwa zviri nyore… ndinovada uye vanozivikanwa zvakanyanya. Pane zvikonzero zvinoverengeka nei infographics ichishanda nemazvo kumabhizimusi 'ekushambadzira madhijitari nzira: Kutaridzika - Hafu yehuropi hwedu yakazvipira kuchiono uye 90% yeruzivo rwatinochengetedza inoonekwa. Mifananidzo, mairafu, uye mapikicha zvese zvine mutsindo masvikiro ekutaurirana nawo kumutengi wako. 65%
Maitiro Ekuyera iyo ROI yeYako Vhidhiyo Kushambadzira Campaigns
Muvhuro, July 23, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kugadzirwa kwevhidhiyo ndeimwe yeaya marongero ekushambadzira ayo anowanzo kuverengerwa kana zvasvika kune ROI. Vhidhiyo inomanikidza inogona kupa chiremera uye kutendeseka kunosimudzira chiratidzo chako uye kusundira tarisiro yako kuchisarudzo chekutenga. Heano mamwe manhamba asinganetsi ane chekuita nevhidhiyo: Mavhidhiyo akaiswa muwebhusaiti yako anogona kukonzera 80% kuwedzera kwehuwandu hwekushandurwa Maemail ane vhidhiyo ane 96% yakakwira yekudzvanya -pakati kana ichienzaniswa nevasiri-vhidhiyo maemail Vashambadziri veVhidhiyo.
Wednesday, April 18, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Isu munguva pfupi yapfuura takagovana infographic uye chinyorwa chakatsanangura matanho masere ekuparura yako yemagariro maseru zano. Vazhinji venyu makatotanga hurongwa hwenyu hwezvemagariro asi vangave vasiri kuona kuwanda kwakawanda sezvawaitarisira. Zvimwe zvacho zvinogona kunge zvichichenesa algorithms mukati memapuratifomu. Facebook, semuenzaniso, ungangobhadhara iwe kubhadharisa zvemukati pane kuzviratidza pachena kune chero munhu anotevera zita rako. Izvo zvese zvinotanga, hongu,
Zvemukati Kushambadzira: Kanganwa Izvo Zvawakanzwa Kusvikira Izvozvi uye Tanga Kugadzira Zvinotungamira nekutevera ino Gwara
China, Kukadzi 15, 2018 China, Kukadzi 11, 2021 Stefan Des
Uri kukuwana kwakaoma kuburitsa inotungamira here? Kana mhinduro yako iri hongu, saka hausi wega. Hubspot akataura kuti 63% yevatengesi vanoti kugadzira traffic nemigwagwa ndiro dambudziko ravo repamusoro. Asi iwe pamwe uri kushamisika: Ini ndinogadzira sei zvinotungamira zvebhizinesi rangu? Zvakanaka, nhasi ndiri kuzokuratidza mashandisiro ekushandisa kushambadzira zvemukati kugadzira zvinongedzo zvebhizinesi rako. Zvemukati kushambadzira inzira inoshanda iwe yaunogona kushandisa kuunza zvinotungamira
Kune akawanda ezvinyorwa kunze uko zvatove pamusoro pekuti zvinotyisa sei zvirimo. Uye kune mamirioni ezvinyorwa zvekunyora kwakanyanya zvemukati. Nekudaro, ini handitende kuti chero mhando yechinyorwa inonyanya kubatsira. Ini ndinotenda mudzi wehurombo zvemukati izvo zvisingaite zvinongova chinhu chimwe - kutsvagisa kutsvagisa. Kutsvaga zvisina tsarukano musoro wenyaya, vateereri, zvinangwa, makwikwi, nezvimwewo zviri kukonzera zvinotyisa zvemukati izvo zvisina zvinhu zvinodiwa